Arsenal oo ku hor kuftey Premier league-ka ka dib guuldaradii Stoke City (Sawiro) – SBC
Arsenal oo ku hor kuftey Premier league-ka ka dib guuldaradii Stoke City (Sawiro)
Arsenal ayaa maanta niyad jab & fadeexad ka qaaday u hanqaltaagadii ugu dambeeyey ee ku aadanaa koobka English Premiership-ka ka dib guuldaro xoogan oo ka soo gaartey garoonka Britannia oo ay kula ciyaarsay galabka kooxda Stoke City. Macalinka Arsenal oo maanta la soo shirtagey shax uu ku niyadsamaa uuna ku hanweynaa in uu dhinaciisa ka galo orodka loogu jiro Premier League-ga, isagoo sidoo kale dibnaha ka qoslayey maadaama todobaadkii hore uu gurigiisa Emirates uu ku soo dubtey Kooxda Man United oo haatan u muuqanaysa inay ku guulaysanayo koobkeedii 19-aad ee Premiership-ka. Arsenal waxaa dhaawac ahaan uga maqnaa xidagaha ay ku xisaabtanto ee khadka dhexe captain Cesc Febregas & Samir Nasir kuwaasi oo dhaawacyo uga maqnaa kulankii maanta.
Tababaraha Stoke City Tony Pulis kulanka maanta waxaaba uga muhiimsanaa ciyaarta Finalka ee todobaadka dambe ay garoonka Wembley kula yeelan doonaan kooxda Manchester City, waxaana kulankaasi uu ahaa kan niyada uu ku hayo maadaama hadii uu qaado koobka FA-ga uu ka ciyaari doono sanadka soo socda koobka Europe League. Ciyaaryahanka Kenwyne Jones ee lambarka 9-aad u qaata kooxda martida loo ahaa ee Stoke ayaa si xarago leh shabaqa Arsenal uga lulay kubad laad xor ah (Free Kick) oo uu soo qaadey ciyaaryahanka Jermaine Pennant taasi oo ku soo dhacdey daafaca Arsenal Johan Djourou. Daqiiqadii 40-aad ayaa ciyaaryahanka Jermaine Pennant wuxuu kubad la dhexmarey difaaca Arsenal isagoo toos ugu tagey goolye Wojciech Szczesny sidaasina ciyaartii waxay ku noqotey 2-0 oo ay Stoke hogaanka ku haysa.
Qaybtii labaad markii la isagu laabtey macalinka Arsenal wuxuu badal ku bixiyey ciyaaryahanka khadka dhexe Ramsey isagoo badal ku keenay weerarka reer Morocco Marouane Chamakh, isagoo isla daqiiqadaasi sidoo kale badal ku soo galiyey Nicklas Bendtner oo lagu badaley Arsheven, waxaana ciyaarta uu badaley shaxda 4-4-2 . Arsenal waxay geed dheer iyo geed gaaban u fuushay sidii ay ciyaarta wax uga badali laheyd oo ay u tiigsan laheyd rajadeeda caatada ah ee Premiership-ka waxaana weeraro aan miro dhal aheyn la tiigsanaysay goosha Stoke City inkastoo daafac uu ku hor gudbanaa. Daqiiqadii 80-aad Macalin Wenger wuxuu badaley xidiga khadka dhexe Song waxaana lagu soo badaley ciyaaryahan Rocisky oo u muuqdey in ciyaarta uu wax ka badaley.
Daqiiqadii 81-aad taageerayaasha martida ah iyo xidigaha The Gunners waxaa soo gashay rajo ka dib markii weeraryahanka Robin Van Persia uu kubad hoose oo laad ah uu suray shabaqada Stoke iyadoo ciyaartii ay noqotey 2-1, laakiin waxay talo faraha ka baxdey daqiiqad ka dib markii weeryahanka Walters 82 uu kubad xoog badan oo faraha hore lagu laadey uu dabamariyey daafaca Arsenal & goolhayaha waxaana ciyaartii ay noqotey 3-1. Afar daqiiqo oo lagu darey 90-kii daqiiqo ee ciyaarta loogu tala galey Arsenal nasiib uma helin inay helaan wax goolal ah inkastoo weeraro badan ay fuliyeen waxaana ciyaartii ku soo dhamaatey 3-1 oo ay gooshu la seexatey kooxda martida loo ahaa ee Stoke City, waxaana garoonka Britania niyad xumo & faruuryo cunid uga soo baxay Arsenal oo haatan xoogeeda iyo awoodeeda isagu geyn doontaa sidii ay ku xajisan laheyd kaalinta 3-aad oo ay mudo sanooyin ah macaamiil ka aheyd.
Arsenal waxay ciyaari labadeeda kulan ee ugu dambeeya Premiership-ka kooxaha Aston Villa & Fulham.